Ndagadzirira Kufambidzana Nomumwe Munhu Here? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kachin Kamba Kazakh Kazakh (Arabic) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mongolian Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Kufambidzana nomumwe munhu kuita sei?
Ndechipi chinangwa chokufambidzana nomumwe munhu?
Ndakura here zvokuti ndingatanga kufambidzana nomumwe munhu?
Sei ndisingafaniri kumhanyira kufambidzana nomumwe munhu?
Unogara uchivhakacha nomumwe mukomana kana kuti musikana. Muri kufambidzana here?
Iwe nomumwe mukomana kana kuti musikana munoda kugara muchingova mose. Munotumirana mameseji pafoni kana kuti kufonerana kakawanda pazuva. Muri kufambidzana here?
Pose pamunenge muine shamwari dzenyu, imi muri vaviri munopedzisira mava penyu moga. Muri kufambidzana here?
Ungangove usina kunetseka nokupindura mubvunzo wokutanga. Asi ungangove wambomira zvishoma usati wapindura wechipiri newechitatu. Chii chaizvo chinombonzi kufambidzana nomumwe munhu?
Chokwadi, kufambidzana nomumwe munhu kutandadzana naye uchiratidza kuti unomuda uye kuti iye anokudawo.
Saka mhinduro yemibvunzo yose mitatu iri pamusoro apa ndeyokuti hungu. Pangava pafoni kana kuti uine munhu wacho, zvimwe pane vanhu kana kuti kwete, kana iwe naye muchinzwa kuti munokwezvana uye munogara muchikurukurirana, muri kufambidzana.
Kufambidzana kunofanira kuva nechinangwa chakanaka—chokubatsira mukomana nomusikana kuona kana zvakakodzera kuti varoorane.
Ichokwadi kuti vamwe vezera rako vangangove vachirerutsa nyaya iyi. Zvichida vanongonakidzwa nokuva neshamwari yepedyo yechikomana kana kuti yechisikana asi vasina chinangwa chokuroorana. Vamwe vangatoona shamwari yakadaro somunhu wokushamisira naye pane vamwe kana kuti anoita kuti vave nomukurumbira uye varemekedzwe.
Zvisinei, kazhinji kushamwaridzana kwakadaro ndokwenguva pfupi. Mumwe musikana anonzi Heather anoti, “Vechiduku vakawanda vanofambidzana nomumwe munhu vanosiyana pashure pevhiki imwe kana kuti mbiri. Vanoona kufambidzana nomumwe munhu sechinhu chinongopfuura zvacho—chinganzi chinoita kuti vagadzirire kuzorambana pane kuroorana.”
Zviri pachena kuti kana uchifambidzana nomumwe munhu, zvinenge zvichitomubata-bata. Saka iva nechokwadi chokuti vavariro dzako dzakanaka.—Ruka 6:31.
Kana ukatanga kufambidzana nemunhu iwe usina pfungwa dzokumuroora unenge wakafanana nemwana ari kutambisa chitoyi obva azochikandira kure
Chimbofunga izvi: Waizoda here kuti mumwe munhu atambe nemanzwiro ako sokunge kuti chitoyi chomwana—chinonhongwa kwekanguva chobva chakurumidza kusiyiwa? Saka iwe haikona kuitira mumwe munhu izvozvo! Bhaibheri rinoti rudo “haruzvibati zvisina kufanira.”—1 VaKorinde 13:4, 5.
Mumwe wechiduku anonzi Chelsea anoti: “Dzimwe nguva ndinombofunga kuti kufambidzana nomumwe munhu kunofanira kungoitwa zvokungonakidzwa, asi hazvizonakidzi kana mumwe munhu achizvikoshesa asi mumwe asingadaro.”
Zano: Kuti ugadzirire kufambidzana nomumwe munhu uye kuzoroorana naye, verenga 2 Petro 1:5-7 uye sarudza unhu humwe chete hwaunoda kushandira pahuri. Mumwedzi mumwe chete, ona kuti unenge wadzidza zvakawanda zvakadini nezvounhu hwacho uye kuti wahuvandudza zvakadini.
Unofunga kuti izera ripi rakakodzera rokuti wechiduku atange kufambidzana nomumwe munhu?
Chibvawo wabvunza mubereki wako mubvunzo iwoyo.
Kazhinji kacho mhinduro yako ichasiyana neyemubereki wako. Kana kuti munogona kupa mhinduro dzakafanana! Zvimwe uri mumwe wevechiduku vakawanda vari kumbomira kufambidzana nomumwe munhu kusvikira vakura zvokunyatsoziva zvavanoda.
Ndizvo zvakaitwa naDanielle ane makore 17. Anoti: “Ndichifunga zvandaizotarisira kune wandaizoda kuroorana naye makore maviri adarika ndinoona zvakasiyana chaizvo nezvandingatarisira iye zvino. Kutaura zvazviri, kunyange panguva ino handifungi kuti ndati ndava kukwanisa kunyatsosarudza. Pandinenge ndava kunzwa kuti ndave ndakatsiga kwemakore anoverengeka, ndipo pandichazofunga nezvokufambidzana nomumwe munhu.”
Pane chimwe chikonzero nei kuri kuchenjera kuti munhu amirire. Bhaibheri rinoshandisa shoko rokuti ‘kuyaruka’ richirondedzera nguva inotanga kusimba manzwiro okuda kuita zvepabonde uye okudanana nomumwe munhu. (1 VaKorinde 7:36) Kuva noushamwari hwepedyo nomumwe munhu paunenge uchiri kuyaruka kungawedzera chido chokuda kuita zvepabonde uye kungaita kuti uite zvakaipa.
Chokwadi, vezera rako vangaona izvozvo sezvisina basa. Vakawanda vavo vanoda kuziva kuti zvepabonde zvinomboita sei chaizvo. Asi unogona kusiyana nemafungiro akadaro uye ndizvo zvaunofanira kuita! (VaRoma 12:2) Kutaura zvazviri, Bhaibheri rinokukurudzira kuti “utize unzenza.” (1 VaKorinde 6:18, New International Version) Unogona ‘kudzivisa dambudziko’ kana ukamirira kusvikira wayaruka.—Muparidzi 11:10.
Kunzwa uchida zvikuru kufambidzana nomumwe munhu usati wagadzirira kungafanana nokumanikidzwa kunyora zamanishoni rokupedzisira rekosi yauchangobva kutanga. Zviri pachena kuti ikoko kunenge kuri kubatirana! Unoda nguva yokudzidza chidzidzo chaunoita kuitira kuti ugoziva zvauchasangana nazvo pabvunzo yacho.
Zvakafanana nokufambidzana nomumwe munhu.
Sezvataona, kufambidzana nomumwe munhu haisi nyaya yokutamba nayo. Saka usati wagadzirira kufambidzana nomumwe munhu, unofanira kuzvipa nguva yokudzidza “nyaya” inokosha zvikuru—kuumba ushamwari.
Paunozowana munhu akakodzera, uchakwanisa kuumba ukama hwakasimba. Chokwadi, imba inobudirira mubatanidzwa weshamwari mbiri dzakanaka.
Kumbomira kufambidzana nomumwe munhu hakukanganisi rusununguko rwako. Asi kuchaita kuti uve norusununguko rwakawanda ‘rwokufara uchiri muduku.’ (Muparidzi 11:9) Uye uchawana nguva yokugadzirira nokuvandudza unhu hwako uye, zvinonyanya kukosha, kuvandudza zvinhu zvine chokuita nokunamata.—Mariro 3:27.
Panguva iyi, unogona kufadzwa nokushamwaridzana nevakomana kana kuti nevasikana. Inzira ipi yakanakisisa yokuita izvozvo? Shamwaridzanai mumapoka ane vakomana nevasikana nevamwe vanhu vakuru. Mumwe musikana anonzi Tammy anoti: “Ndinofunga kuti zvinonakidza zvikuru kuita kudaro. Zviri nani kuva neshamwari dzakawanda.” Monica anobvumirana nazvo. Anoti: “Kushamwaridzana mumapoka ipfungwa yakanaka zvikuru nokuti unokwanisa kushamwaridzana nevanhu vane unhu hwakasiyana-siyana.”
Kusiyana neizvi, kana ukakurumidza kuisa pfungwa dzako pamunhu mumwe chete, unenge uchiita zvinhu zvinozokurwadza. Saka zvipe nguva. Shandisa nguva iyi youpenyu hwako kudzidza nzira dzokutanga ushamwari uye kuhuchengetedza. Kana ukazosarudza kufambidzana nomumwe munhu, uchange wava kuzviziva iwe pachako uye zvaunoda pamunhu wauchagara naye kwoupenyu hwose.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndagadzirira Kufambidzana Nomumwe Munhu Here?
ijwyp nyaya 14